Daty mahomby: 20 aprily 2020
AudioSourceRE ("Us", "we", or "our") no miasa ny www.audiosourcere.com Website and the AudioSourceRE rindranasa finday (eto dia antsoina hoe "Serivisy").
Ity pejy ity dia mampahafantatra anao momba ny politikantsika momba ny famoriam-bola, fampiasana sy famoahana angona manokana rehefa mampiasa ny Service ary ny safidy nifandraisanao tamin'ny angona.
Mampiasa ny angon-drakitrao izahay provide sy improve ny Serivisy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Serivisy dia manaiky ny fanangonana sy ny fampiasana fampahalalana mifanaraka amin'ity politika ity ianao. Raha tsy voafaritra mazava ao amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity, ny teny ampiasaina ao amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia manana dikany mitovy amin'ny Terms sy Conditions anay.
Ny serivisy dia midika hoe www.audiosourcere.com Website and the AudioSourceRE/ Fampiasa finday SourceRE ampiasain'ny AudioSourceRE DAC
Ny data personnel dia midika momba ny olona velona izay azo fantarina avy amin'ireo tahiry ireo (na avy amin'ireto sy fampahalalana hafa na ao amin'ny fananantsika na mety hiditra ao amin'ny fananantsika).
Fampiasana data dia angon-drakitra voaangona amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy na avy amin'ny fotodrafitrasa Serivisy (ohatra, ny faharetan'ny fitsidihana pejy).
Cookies dia rakitra kely voatahiry ao amin'ny fitaovana (ordinatera na fitaovana finday).
Data Controller dia midika hoe olona voajanahary na ara-dalàna izay (na irery na miaraka na iraisana amin'ny olon-kafa) dia mamaritra ny antony anaovana azy sy ny fomba fampahalalana momba ny tena, na tokony hisy, processed. Ho an'ny tanjon'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia Mpandrindra Data momba ny angon-drakitrao manokana izahay.
Data Processors (na Serivisy Providers)
Data Processor (na Serivisy Provider) dia midika hoe olona voajanahary na ara-dalàna izay proHita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index./ Providers mba proatsaharo tsara kokoa ny angonao.
Lohahevitra momba ny data (na mpampiasa)
Ny lohahevitry ny rakitra dia olona velona izay mampiasa ny tolotrasa ary mifototra amin'ny Data Personal.
Raha te hampiasa ny iray aminay ianao profantsona, ao anatin'izany ny kinova fitsapana, mila misoratra anarana aminay ianao. Ianao dia tsy maintsy proalefaso ny anaranao, ny adiresy mailaka manan-kery ary na ny kaody fisoratana anarana providian'ny mpivarotra anao. Aorian'ny fisoratana anarana dia hahazo ny ambaratonga faha-2 sy ho an'ny mpanohana ianao ary hahazo kaody fampandehanana izay azonao ampiasaina hivohana ilay rindrambaiko. Raha tsy izany no ataonao proampidiro aminay ny angona manokana ilaina amin'ny fisoratana anarana, tsy afaka izahay promanohana ny haavo 2+ ambaratonga ambony, na ny kaody fampandehanana. Raha tsy tianao proampidiro aminay ilay fampahalalana, tsy azonao ampiasaina ny anay profantsona.
Mandritra ny fampiasantsika ny Serivisinay dia mety mangataka aminao izahay proampidiro aminay ny fampahalalana azo fantarina manokana izay azo ampiasaina hifandraisana na hahafantarana anao ("Data manokana"). Ho anao manokana, ny fampahalalana azo fantarina dia mety misy, saingy tsy ferana amin'ny:
Adiresy, Fanjakana, Province, Kaody ZIP / Paositra, Tanàna, Firenena
Azontsika atao ny mampiasa ny angon-drakitrao manokana hifandraisanao aminà taratasim-baovao, marketing na profitaovam-pihetsika sy fampahalalana hafa izay mety hahaliana anao. Azonao atao ny misafidy ny tsy handray na iza na iza amin'ireto fifandraisana ireto aminay amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy tsy hisoratra anarana na ny torolàlana prohita ao amin'ny mailaka alefanay.
Azonay atao ihany koa ny manangona fampahalalana izay alefan'ny browser-nao isaky ny mitsidika ny Serivisinay ianao na rehefa miditra amin'ny serivisy amin'ny alàlan'ny fitaovana finday ("Data Usage").
Ity Data Fampiasana ity dia mety misy fampahalalana toy ny Internet amin'ny solo-sainao Proadiresy tocol (oh: adiresy IP), karazana browser, kinova fitetezam-paritra, ireo pejin'ny Serivisy notsidihinao, ny ora sy ny datin'ny fitsidihanao, ny fotoana laninao tamin'ireny pejy ireny, ny famantarana ny fitaovana tsy manam-paharoa ary ny angona diagnostika hafa.
Rehefa miditra amin'ny serivisy finday ianao, ity Data Data dia ity dia mety misy fampahalalana toy ny karazana finday ampiasainao, ny ID ID tokana anananao, ny adiresy IP an'ny findainao, ny rafitra findainao, ny karazana Internet finday. mpizara fampiasa izay, fampahafantarana fitaovana tsy manam-paharoa sy angon-drakitra diagnostika hafa.
Azontsika atao ny mampiasa sy mitahiry ny mombamomba anao amin'ny toerana misy anao raha omenao lalana izahay hanao izany ("Data Data"). Ampiasainay ity angona ity prosary mihetsika momba ny serivisinay, to improve ary ampanjifaina ny serivisinay.
Azonao atao ny mamela na manafoana ny tolotra toerana rehefa mampiasa ny Service ou ianao amin'ny fotoana rehetra amin'ny famolavolan'ny solosainao.
Manara-maso angon-drakitra momba ny Cookies
Mampiasa cookies sy teknolojia fanaraha-maso toy izany izahay mba hijery ny asa atao ao amin'ny Service ary dia mitazona fanazavana.
Cookies dia rakitra miaraka amina data kely izay mety misy mpampahalala tokana tsy fantatra anarana. Ireo cookies dia alefa amin'ny browser-nao amin'ny tranokala iray ary tehirizina amin'ny fitaovanao. Ny teknolojia fanarahana hafa dia ampiasaina ihany koa toy ny fanilo, marika ary script hanangonana sy hanarahana ny mombamomba ary ho impromanadihady ny serivisinay.
Ohatra an'ny Cookies azontsika ampiasaina:
Session Cookies.Mampiasa Cookies ho an'ny Six izahay mba hikarakarana ny tolotrasa.
Preference Cookies.Mampiasa cookies isika mba hahatsiaro ny safidinao sy ny toe-javatra samihafa.
Security Cookies.Mampiasa cookies ho an'ny fiarovana isika.
Advertising Cookies. Ny fampiasana cookies dia ampiasaina hanompo anao amin'ny dokam-barotra izay mety ho anao sy ny tombontsoanao.
AudioSourceRE dia mampiasa ny angona nangonina ho an'ny tanjona samihafa:
To promanaova horonantsary sy mitazona ny serivisinay
To provide ny fanohanan'ny mpanjifa
Mba hanangonana fanadihadiana na fampahalalana sarobidy hahafahantsika manahakaprony Serivisinay
Mba hanaraha-maso ny fampiasana ny fanompoana
To promanome anao vaovao, tolotra manokana ary fampahalalana ankapobeny momba ny entana, serivisy ary hetsika hafa atolotray izay toa ireo izay efa novidinao na nanontanianao raha tsy nisafidy ny tsy handray vaovao toy izany ianao
Fototra ara-dalàna ho an'ny Promanapaka ny angon-drakitra manokana ao ambanin'ny Data ankapobeny Protection Regulation (GDPR)
Raha avy any amin'ny faritra ara-toekarena eropeana (EEA) ianao, AudioSourceRE Ny fototry ny lalàna an'ny DAC amin'ny fanangonana sy fampiasana ny fampahalalana manokana izay voalaza ao amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia miankina amin'ny Data manokana izay angoninay sy ny toe-javatra manokana itangonay azy.
AudioSourceRE mety koa proatsaharo ny angonao manokana satria:
Mila manao fifanarahana aminao izahay
Nomena alalana izahay hanao izany
The proTombontsoa ho antsika ny fitsaharana ary tsy fanitsakitsahana ny zonao izany
Ho an'ny fandoavana protanjon'ny fitsaharana
Manaraka ny lalàna
Fanombanana, fampandrosoana ary improving ny tranokalanay, ny profantsona sy serivisy.
To promitarika ny tontolontsika IT, ny profantsona sy serivisy amin'ny fanafihana sy fidirana an-tsokosoko
To protect our and the licensors copyright
Arovy ny data
AudioSourceRE hihazona ny fampahalalana momba anao manokana fotsiny raha tsy ilaina amin'ny tanjona napetraka ao amin'ity Politika miafina ity. Hihazona sy hampiasa ireo angon-drakinao manokana araka ny tokony ho izy izahay mba hanaraka ny adidy ara-dalàna (ohatra, raha takiana amin'ny fitazonana ny angon-drakinao mba hanaraka ireo lalàna azo ampiharina) ianao, hamaha ny fifamaliana ary hampihatra ny fifanarahana ara-dalàna sy politika.
AudioSourceRE dia hitazona ny Usage Data ho an'ny tanjona fanadihadiana anatiny ihany koa. Ny data momba ny fampiasana dia voatazona mandritra ny fotoana fohy kokoa, afa-tsy rehefa ampiasaina hanamafisana ny fiarovana na hanohanana izany data izanyprony fiasan'ny serivisinay, na adidinay ara-dalàna ny mitazona an'ity data ity mandritra ny fotoana lava kokoa.
Famindrana ny data
Ny mombamomba anao, ao anatin'izany ny angon-drakitra manokana, dia azo afindra amin'ny - ary tazomina amin'ny - solosaina any ivelan'ny fanjakanao, province, firenena na fahefana ara-panjakana hafa misy ny angona prony lalàm-pitantanana dia mety tsy mitovy amin'ny an'ny faritra iadinao.
Raha any ivelan'i Irlandy ianao dia misafidy proalefaso aminay ny fampahalalana, azafady azafady fa mamindra ny angona izahay, ao anatin'izany ny Data manokana, any Irlandy proatsaharo any.
AudioSourceRE dia handray ny dingana rehetra ilaina amin'ny fiantohana fa voaraja am-pahatokiana ny angon-drakitrao ary mifanaraka amin'ny Politikan'ny tsiambaratelo ity ary tsy hisy famindrana ny Data Data anao manokana amin'ny fikambanana na firenena iray raha tsy misy fanaraha-maso tsara amin'ny toerany ary ao anatin'izany ny fiarovana ny data sy fampahalalana manokana.
Famaritana ny Data
If AudioSourceRE dia mirotsaka amin'ny fampivondronana, fahazoana na fivarotana fananana, mety hafindra ny angonao manokana. Isika dia ho promanomeza fampandrenesana alohan'ny hamindrana ny angon-drakitrao manokana ary iharan'ny politika momba ny tsiambaratelo hafa.
Fanambarana ho an'ny fampiharana ny lalàna
Tao anatin'ny toe-javatra sasany, AudioSourceRE mety takiana hamoaka ny mombamomba anao manokana raha toa ka takiana amin'ny fanaovana izany na ho valin'ny fangatahana ataon'ny manampahefana (toy ny fitsarana na masoivoho governemanta).
AudioSourceRE mety manambara ny angon-drakinao manokana amin'ny finoana tsara fa ilaina ny hetsika toy izao:
To promitarika sy miaro ny zony na property ny AudioSourceRE
To promitodika amin'ny fiarovana manokana an'ireo mpampiasa ny Serivisy na ny besinimaro
To profironana manohitra ny andraikitra ara-dalàna
Ny fiarovana ny angon-drakitrao dia zava-dehibe aminay saingy tadidio fa tsy misy fomba fampitana amin'ny Internet na fomba fitehirizana elektronika azo antoka 100%. Mandritra ny fiezahana hampiasa fomba azo ekena ara-barotra protect your Personal Data, tsy afaka miantoka ny fiarovana azy tanteraka izahay.
Ny data-nao Prozon'ny tection ambanin'ny Data ankapobeny Protection Regulation (GDPR)
Raha mponina ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana (EEA) ianao dia manana angona sasany prozon'ny fifamoivoizana. AudioSourceRE mikendry dingana tokony handinihana anao hanitsy, hanovana, hamaha na hametra ny fampiasana ny angon-drakinao manokana.
Raha te-hampahafantarina ny momba ny data manokana momba antsika ianao ary raha tianao ny hanaisotra azy amin'ny rafitra misy anay, azafady mba mifandraisa aminay.
Amin'ny toe-javatra sasany dia manana ireto angon-drakitra manaraka ireto ianao prozon'ny tection:
Ny zo hidirana, hanavao na hamafa ny fampahalalana ananantsika. Isaky ny azo atao, dia azonao atao ny miditra, manavao na mangataka ny famafana ny mombamomba anao manokana ao anatin'ny sehatry ny fananan-kaontinao. Raha tsy vitanao ny manatanteraka ireo hetsika ireo, azafady mba mifandraisa aminay mba hanampy anao.
Zo ny fanitsiana Azonao atao ny manitsy ny fampahalalana azonao raha tsy marina na tsy ampy ny fampahalalana.
Ny zo hanonerana. Manan-jo hanohitra ny anay ianao profitsaharana ny Data manokana.
Zo ny famerana. Manan-jo hangataka ianao mba hameperanay ny profampitsaharana ny mombamomba anao manokana.
Ny zon'ny mpiasa Manan-jo hanana izany ianao pronaseho tamin'ny kopian'ny mombamomba anay momba anao amin'ny endrika voavolavola, azo vakina amin'ny milina ary matetika ampiasaina.
Ny zo hanajanona ny fanekena. Manan-jo hanaisotra ny fanekenao aminao amin'ny fotoana rehetra ianao AudioSourceRE miankina amin'ny fanekenao ny proatsaharo ny mombamomba anao.
Mariho fa mety hangataka anao hanamarina ny mombamomba anao ianao alohan'ny hamaliana izany fangatahana izany.
Manan-jo hitaraina amin'ny Data ianao ProTection Authority momba ny fanangonana sy ny fampiasana ny angon-drakitrao manokana. Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa azafady ny angona anao profahefana misahana ny fifamoivoizana ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana (EEA).
Mampiasa orinasa sy olon-kafa antoko fahatelo izahay mba hanamorana ny serivisinay ("Serivisy Providers "), proalefaso ny serivisy ho anay, manatanteraka serivisy mifandraika amin'ny serivisy na manampy anay amin'ny famakafakana ny fomba fampiasana ny serivisinay.
Raha hampiasa ny rindrambaiko misy anao dia ho pronalahatra tamin'ny kaody fampahavitrihana. Mila kaonty amin'ny PACE Anti-Piracy, Inc., fantatra amin'ny anarana hoe "ilok" ihany koa ianao. Manamora ny kopianay ity kaonty ity protection, midika izany fa fototry ny fanamarinana ny satan'ny fahazoan-dàlana sy profahazoana miditra amin'ny rindrambaiko mankany aminao. Ity kaonty ity dia ampiasaina hamantarana anao ho mpampiasa manana lisansa sy providio ny fidirana amin'ny rindrambaiko ary itahirizanao ny lisansa rindrambaiko ho anao (sy izahay). Mba hahafahanay mitantana ny licence-nao, promanomeza fanampiana, ary ampiharo amin'ny ankapobeny ny adidinay momba ny fifanarahana aminao eo amin'ny sehatry ny lisansa rindrambaiko PACE promanolotra anay amin'ilay ampahan'ny angon-drakitrao izay misy ifandraisany mivantana amin'ny lisansa misy anay amin'ny rindrambaiko, toa ny anarana, adiresy mailaka, adiresy IP, ary lisitr'ireo sy satan'ireo lisansa misy anao, ary koa ny mombamomba ny anarana sy OS an'ny solosaina rehetra mampiasa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana izahay.
www.ilok.com, izay fananan'ny PACE Anti-Piracy, Inc., ary miankina amin'ny politikany manokana, izay tokony hodinihinao alohan'ny fisoratana kaonty, ao amin'ny https://www.ilok.com/privacy -policy, ary https://www.ilok.com/terms-of-use.
Rehefa mamorona kaonty Pace / iLok ianao dia manao izany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ary profametrahana data amin'ny antoko fahatelo, ambanin'ny fehezan-dalàna momba ny tsiambaratelo sy ny fampiasa.
Mampiasa ny Google Cloud sy ny Microsoft Azure Cloud Computing ary ny Serivisy amin'ny Platform izahay proatsaharo ny fisarahana rehetra ho an'ireo mpampiasa rindrambaiko. Google Cloud dia iharan'ny politikany manokana momba ny tsiambaratelo, izay tokony hodinihinao alohan'ny hisoratana anarana kaonty ao amin'ny https://policies.google.com/privacy. Microsoft Azure Cloud Computing and Platform Services dia iharan'ny politikany manokana ihany koa, izay tokony hojerenao koa alohan'ny hisoratana anarana kaonty, amin'ny https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.
Google Analytics dia tolotra fanaraha-maso ho an'ny tranonkala natolotr'i Google izay mandeha sy mitatitra ny fifamoivoizana amin'ny tranokala. Google dia mampiasa ny angona nangonina mba handinika sy hanara-maso ny fampiasana ny Service. Ity angon-drakitra ity dia zaraina amin'ny serivisy Google hafa. Google dia mety hampiasa ny angona nangonina ao amin'ny contextualise ary manosotra ny doka amin'ny tambazotran'ny dokam-barotra manokana.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fanaon'ny Google manokana dia tsidiho ny pejin-tranonkala momba ny momba ny tsiambaratelo Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Piwik na Matomo
Piwik na Matomo dia serivisy tranonkala analytics. Azonao atao ny mitsidika ny pejin'ny politikany momba ny tsiambaratelo eto: https://matomo.org/privacy-policy
Clicky dia serivisy tranonkala analytics. Vakio eto ny politikan'ny tsiambaratelo momba an'i Clicky eto: https://clicky.com/terms
Statcounter dia fitaovana famakafakana fifamoivoizana tranonkala. Azonao atao ny mamaky ny politikan'ny tsiambaratelo ho an'ny Statcounter eto: https://statcounter.com/about/legal/
Serivisy Flurry Analytics dia pronaroson'i Yahoo! Inc.
Azonao atao ny miala amin'ny serivisy Flurry Analytics hisorohana ny Flurry Analytics amin'ny fampiasana sy fizarana ny mombamomba anao amin'ny fitsidihana ny pejy Flurry's Opt-out: https: //dev.flurry.com/secure/optOut.do
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiharana momba ny fiainana manokana sy ny politikan'ny Yahoo !, tsidiho azafady ny pejin'ny Politika momba ny fiainana manokana:
Mixpanel dia pronaroson'ny Mixpanel Inc.
azonao atao ny manakana ny mixpanel tsy hampiasa ny mombamomba anao ho an'ny tanjon'ny analytics amin'ny alàlan'ny fidirana. Mba hisafidianana ny serivisy Mixpanel dia tsidiho ity pejy ity: https://mixpanel.com/optout/
Afaka mampiasa Serivisy ankolafy hafa izahay Providéo haneho doka aminao hanampy anao hanohana sy hitazona ny serivisinay.
Cookie GoogleClick DoubleClick an'ny Google
Google, amin'ny maha mpivarotra antoko fahatelo azy, dia mampiasa cookies handefasana doka amin'ny serivisinay. Ny fampiasan'i Google ny cookie DoubleClick dia mamela azy sy ireo mpiara-miasa aminy handefa doka amin'ny mpampiasa anay mifototra amin'ny fitsidihan'izy ireo ny Serivisinay na tranokala hafa amin'ny Internet.
Azonao atao ny misafidy ny fampiasana ny DoubleClick Cookie ho an'ny doka mahaliana amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny pejin-tranonkala Google Ads Settings: http://www.google.com/ads/preferences/
Bing Ads dia serivisy fanaovana doka pronaroson'ny Microsoft, Inc.
Azonao atao ny misafidy ny tsikera Bing Ads amin'ny alàlan'ny fitsidihana: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Bing Ads, tsidiho azafady ny politikany momba ny tsiambaratelo: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
AdMob avy amin'i Google
AdMob avy amin'i Google dia pronotohanan'ny Google Inc.
Azonao atao ny misafidy miala amin'ny AdMob amin'ny serivisy Google amin'ny manaraka ny toromarika nofaritan'i Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Raha mila fampahalalana misimisy kokoa momba ny fampiasan'i Google ny fampahalalana nangonina dia tsidiho azafady ny pejy “Ahoana no ampiasan'i Google ny angona rehefa mampiasa ny tranokalanay na ny fampiharana izahay”
Flurry dia pronaroson'i Yahoo! Inc.
Azonao atao ny misafidy miala amin'ny serivisy Flurry ary manakana azy io amin'ny fampiasana sy hizara ny fampahalalana anao amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny pejy Flurry Opt-out:
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny politikam-panao Yahoo !, tsidiho azafady ny politikany manokana:
InMobi dia pronaroson'ny InMobi Pte Ltd.
Azonao atao ny misafidy hiala amin'ny serivisy InMobi amin'ny manaraka ny torolàlana araky ny voalaza ao amin'ny pejy InMobi Opt-out: http://www.inmobi.com/page/opt-out/
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiharana momba ny tsiambaratelo sy ny politikan'ny InMobi, tsidiho azafady ny Fitsipika momba ny tsiambaratelo InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/
Fampihorohoroana momba ny fihetsika
AudioSourceRE Mampiasa serivisy famerenana ny bikan'ny tranokala fahatelo ho anao rehefa avy nitsidika ny serivisy ianao. Izahay sy ireo mpivarotra avy amina fahatelo dia mampiasa mofomamy mba hampahafantarana, hahafantatra ary manompoa ny doka miankina amin'ny fitsidihan'ny serivisy teo aloha.
Ny serivisy fanoratana amin'ny Google AdWords dia pronotohanan'ny Google Inc.
Azonao atao ny miala amin'ny Google Analytics for Display Advertising ary manova ny dokam-barotra Google Display Network amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny pejy Google Ads Settings:
Google dia manolo-kevitra ihany koa ny hametraka ny Add-on Browser Google Analytics Opt-out Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - ho an'ny tranonkalanao Fanampiana an'ny Browser Google Analytics Opt-out promanome vahana ireo mpitsidika manana ny fahaizany misoroka ny angon-drakitra tsy angoniny sy ampiasain'ny Google Analytics.
Ny serivisy fanoratana amin'ny Twitter dia pronaroson'ny Twitter Inc.
Azonao atao ny miala amin'ny doka miankina amin'ny Twitter amin'ny fanarahana ny torolalany: https://support.twitter.com/articles/20170405
Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny fanaon'ny fiainana manokana sy ny politikan'ny Twitter amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny pejin'ny politikany momba ny tsiambaratelo: https://twitter.com/privacy
Ny serivisy fanoratana amin'ny Facebook dia pronaroson'ny Facebook Inc.
Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny dokam-barotra miorina amin'ny Facebook amin'ny alàlan'ity pejy ity: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Raha te hiala amin'ny doka miankina amin'ny Facebook dia araho ireto torolalana avy amin'ny Facebook ireto: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Mifikitra amin'ny fitsipiky ny fitsipika momba ny tena momba ny fitondran-tena an-tserasera napetraky ny Digital Advertising Alliance ny Facebook. Azonao atao ihany koa ny misafidy amin'ny Facebook sy ny orinasa mpandray anjara hafa amin'ny alàlan'ny Digital Advertising Alliance any Etazonia http://www.aboutads.info/choices/, ny Digital Advertising Alliance any Canada any Canada http://youradchoices.ca/ na ny European Interactive Digital Advertising Alliance any Eropa http://www.youronlinechoices.eu/, na misafidy ny fampiasana ny filan'ny findainao.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiharana fiainana manokana an'ny Facebook dia tsidiho azafady ny Politikan'ny angon-drakitra Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Ny serivisy fanamarihan-tserasera Pinterest dia pronaroson'ny Pinterest Inc.
Azonao atao ny miala amin'ny doka miankina amin'ny Pinterest amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fampiasa "Aza Arahana" amin'ny tranokalanao na amin'ny fanarahana ny torolalana Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data
Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny fanaon'ny fiainana manokana sy ny politikan'ny Pinterest amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny pejin'ny politikany momba ny tsiambaratelo: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Ny serivisy fanoratana AdRoll dia pronaroson'ny Semantic Sugar, Inc.
Azonao atao ny misafidy ny biraon'ny AdRoll amin'ny alàlan'ny fitsidihana ity pejy an-tsarin'ny AdRoll Advertising ity: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1nt=1nw=false
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fanaon'ny AdRoll momba ny tsiambaratelo, tsidiho ny pejin'ny tranonkala AdRoll Privacy: http://www.adroll.com/about/privacy
Serivisy famerenam-barotra mpijery tonga lafatra dia pronaroson'ny NowSpot Inc.
Azonao atao ny misafidy ny valin'ny fanamarihan'ny mpijery tonga lafatra amin'ny fitsidihana ireto pejy ireto: Platform Opt-out (http://pixel.prfct.co/coo) sy ny Partner Opt-out (http://ib.adnxs.com/optout).
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fanaon'ny tsiambaratelo an'ny Audios tonga lafatra, tsidiho azafady ny pejy momba ny Politika Optical Audience tonga lafatra.
Ny serivisy fanamarihana AppNexus dia pronotohanan'ny AppNexus Inc.
Azonao atao ny misafidy ny biraon'ny AppNexus amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny pejy manokan'ny AppNexus Platform: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fampiharana momba ny fiainana manokana amin'ny AppNexus, tsidiho azafady ny pejin'ny tranonkala AppNexus Platform Privacy:
Azontsika atao indraindray ny mampiditra horonantsary avy amin'ny YouTube (serivisy an'ny Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Etazonia). Ireo horonan-tsary ireo dia voatahiry ao amin'ny www.youtube.com fa mety alefa mivantana amin'ny tranokalanay.
YouTube dia hahazo fampahalalana izay notsidihinao tamin'ny tranokalanay. Mitranga izany na eo aza ny fidirana amin'ny kaontin'ny mpampiasa anao proarahin'i YouTube na tsy manana kaonty mpampiasa.
YouTube dia mitahiry ny angonao amin'ny maha-mpampiasa anao prorakitra ary ampiasao izany ho an'ny tanjon'ny dokam-barotra, ny fikarohana amin'ny tsena ary ny mampifanaraka ny fanolorana tranokala ho anao.
Manan-jo hanohitra ny famoronana mpampiasa ianao profisie, fa tsy maintsy mifandray amin'ny YouTube mivantana ianao raha te hampiasa an'io zony io.
Fampahalalana fanampiny momba ny tanjon'ny sy angon-drakitra voaangona ary prohita amin'ny alàlan'ny politika manokana momba azy manokana ny cessed YouTube. Hahita fampahalalana fanampiny momba ny zonao sy ny safidy napetrakao ianao protect your privacy at www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google ihany koa proAtsaharo ny angonao manokana any Etazonia ary iharan'ny angona EU-Etazonia profifanarahana fifanarahana; www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Amin'ny sehatra an-tserasera an'ny antoko fahatelo providers (YouTube, Facebook, Google, Twitter, Soundcloud, Instagram), mety hahita vondrona na mpampiasa ianao izay mamoaka ny atiny misy ifandraisany na mampiasa anay profantsona (oh: ny lalana noforonin'izy ireo). Izahay dia misarika ny sainao ho amin'ny fepetra sy fampiasa ampiasain'ny mpamatsy antoko fahatelo toa izany ary amin'ny angon-drakitra misy azy avy profanambarana momba ny tection sy ny politika momba ny tsiambaratelo.
AudiosourceRE tsy tompon'andraikitra amin'ny fomba rehetra momba ny atiny omena amin'ireny forum ireny, aza manamafy ireo hevitra rehetra voatonona ao ary manilika ny fiarahany rehetra miaraka amin'ny atiny.
Mety isika provide aloa profantsona sy / na serivisy ao anatin'ny Serivisy. Amin'izay dia mampiasa serivisy antoko fahatelo izahay handoavana vola profitsaharana (oh: fandoavana processors).
Izahay dia tsy hitahiry na hanangona ny antsipiriany momba ny karatra fandoavam-bola. Izany vaovao izany dia proniatrika mivantana tamin'ny fandoavam-bola avy amin'ny antoko fahatelo izahay proireo mpitsoa-ponenana izay mampiasa ny mombamomba anao manokana dia fehezin'ny politikany manokana. Ireo fandoavam-bola ireo prony cessors dia manaraka ny fenitra napetraky ny PCI-DSS araka izay tantanan'ny PCI Security Standards Council, izay ezaka iraisan'ny marika toa ny Visa, MasterCard, American Express ary Discover. Ny takiana PCI-DSS dia manampy amin'ny fiantohana azo antoka ny fikirakirana ny mombamomba ny fandoavam-bola.
Ny fandoavana prony cessors iarahantsika miasa dia:
Ny politikany momba ny tsiambaratelo dia azo jerena ao amin'ny http://fastspring.com/privacy/
Rohy mankany amin'ny toerana hafa
Ny Serivisinay dia mety misy rohy mankamin'ny tranonkala hafa izay tsy ataonay. Raha tsindrio ny rohy an'ny antoko fahatelo dia hitodika any amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ianao. Manoro hevitra mafy anao izahay handinika ny Politikan'ny tsiambaratelo isaky ny tranonkala tsidihinao.
Izahay dia tsy manana fifehezana ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatiny, ny politika momba ny fiainana manokana na ny fanaon'ny tranonkala na serivisy.
Izahay dia tsy manangona fahalalana mombamomba azy manokana avy amin'ny olona latsaky ny 16 taona. Raha toa ianao ka ray aman-dreny na mpiambina ary fantatrao fa manana ny zanakao pronanolotra anay Data miaraka aminay, azafady mba mifandraisa anay. Raha fantatsika fa nanangona angon-drakitra momba ny tena manokana avy amin'ny ankizy izahay nefa tsy voamarina ny faneken'ny ray aman-dreny, dia mandray fepetra izahay hanesorana ireo fampahalalana ireo avy amin'ny mpizara anay.
Hampahafantarinay anao amin'ny alàlan'ny mailaka sy / na a profampandrenesana kely momba ny serivisinay, alohan'ny fanovana lasa mahomby sy fanavaozana ny "daty mahomby" eo an-tampon'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity.
Amin'ny alàlan'ny mailaka: privacy @audiosourcere.com
Amin'ny fitsidihana ity pejy ity ao amin'ny tranokalanay: https: / www.audiosourcere.com / ny fiainana manokana
Amin'ny alàlan'ny mailaka: AudioSourceRE DAC, Ivotoerana Center, Bishopstown, Cork City, Republic of Ireland, T12 Y275